Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ugwu Basque | Netwọk Mgbasa Ozi
na Ugwu Basque Ọ bụ aha a na-enye ugwu dị na ugwu ugwu ugwu Iberian Peninsula. Ọ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ugwu Cantabrian na njikọta na Pyrenees. A makwaara ya site na aha ndị ọzọ dịka Basque Arch, Basque depression na ụzọ Basque. Mgbatị ya na-ekpuchi akụkụ nke ókèala nke Basque Country na Navarra. Ugwu ndị a abụghị naanị na-enye anyị ihe ngosi eke na ọdịdị ala dị egwu, mana ejiri mara ya nwere akụkụ nke akụkọ ntolite jupụtara na ọdịnala, akụkọ ifo, omenala na akụkọ ifo.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara jioloji na njirimara nke ugwu Basque.
2 Omenala nke Ugwu Basque
4 ihu igwe
Di iche iche di iche-iche na mbara ala nke ugwu Basque di iche-iche adighi-eju anya. Nke a bụ n'ihi na o nwere e ji mara ahịhịa gburugburu ebe obibi nke iru mmiri Atlantic ihu igwe. N’oge ụfọdụ n’afọ, dị ka oge mgbụsị akwụkwọ, oké ọhịa na-ama mma dị egwu. Karịsịa, gburugburu ahịhịa a mejupụtara beech, akpu, yew na birch. Ọbụghị naanị na ị nwere ụdị ahịhịa na-anwụ anwụ, mana ịnwekwara mgbe niile. Nchikota a na-eme ka o nwekwuo odo.
N'etiti umu osisi na-eto eto anyị na-ahụ holm oak na pine a ma ama. Ndi mmadu abuputara pine a ka ha wee rie osisi ha. Ọ bụrụ na ị gaa mba Basque ịga mee njem nleta, ugwu Basque bụ ụzọ ị na-ekwesịghị ịhapụ. Ọnụ ọnụ ugwu ndị ahụ na-adịkarị ihe dị ka otu puku mita na narị isii n'ịdị elu.
E kewara ugwu a n'etiti mpaghara 3, ọ nweghị nke dị mkpa karịa nke ọzọ. Anyị na-ahụ akara ngosi Aizkorri massif nke, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị elu, bụ nke a kacha mara amara. Ogologo ya ruru mita 1.528 wee lelee anya ruo Aitxuri. Nke a bụ ugwu kachasị elu nke nwere mita 1.551. Na usoro ugwu a, Arbelaitz, nke dị mita 1513, kwesịkwara ịpụta ìhè.
Otu ugwu kachasị mkpa n’Ugwu Basque bụ Gorbea nke ịdị elu ya dị otu puku na otu narị na iri anọ na asatọ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị otu n'ime ndị kachasị elu, ọ bụ otu n'ime ihe a maara nke ọma na ọnụ Basque. Nke a anaghị akwụsị ebe a, ọ bụrụ na anyị amalite depụta ọnụ ọnụ niile, anyị ga-ahụ ugwu nke Álava na Aratz, Palomares, Cruz del Castillo, wdg.
Omenala nke Ugwu Basque
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ugwu Basque abụghị naanị ebe ndị njem nlegharị anya na-aga njem. Anyị na-ahụkwa ọdịnala ndị chọrọ ịmata ihe dị mma ịmara. Ọmụmaatụ, ọdịnala ị na-eme chiiz nke Ugwu Cantabrian nwere nke chiiz Idiazabal. Ọ bụ a cheese nke sitere na ebe ndị a. A na-eji Carranzana raw na mmiri ara ehi Latxa eme ya ma kemgbe oge ochie ejirila ịta ahịhịa bara ụba iji mee ka chiiz ka mma. A na-ekwu okwu banyere a cheese na a flavor na masịrị ndị kasị achọ palates. O nwere uzo di iche iche dika anwuru anwu na achicha achicha. Ha abuo na ato uto.
E kewara ugwu Basque na nkewa abuo. Otu bụ ugwu na ndị ọzọ na ndịda. Nkewa abụọ a kachasị abụkarị okike. E nwekwara ụfọdụ ala nwere ájá na ájá na ihe ndị ọzọ. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ọnụ ugwu ndị ahụ adịchaghị ukwu mana ha na-enye mma na-enweghị atụ n’ihi ahịhịa.
O nwere ugwu a na-akpọda akpọda na ndagwurugwu na okwute ndị jupụtara n'ọtụtụ limestone. N'ebe ndị a na ndagwurugwu a, ọtụtụ ugodi na-ebi. Ihe enyemaka a bụ uru ndị mmadụ na-enwe ịrị ugwu. Na Amboto massif, na mara mma nke Atzarte bụ ụlọ akwụkwọ ịrịgo ugwu kachasị mkpa na Spain niile.
A na-akpụ ugwu ndị a n'oge usoro alpine nke dị adị. E mekwara ka usoro ọmụmụ ahụ nwee njikọ nke Pyrenees. Ihe dị iche nke mpaghara ndị guzobere bụ na n'ime ime ọdịda anyanwụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ọ kachasị mejupụtara ngwongwo limestone. N'aka nke ọzọ, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri jupụtara na nkume siliceous.
Mgbe ahụ anyị ga-amata ọdịiche dị na nke anyị hụrụ "Ala Basque" nke nwere ugwu pere mpe dị n'okpuru 1.000 mita na mba Basque dị elu nwere ugwu dị elu karịa mita 1.000. Ha abụọ na-ekewapụ site na netwọkụ hydrographic. Ugwu ndị ahụ rutewere n’oké osimiri wee ghọọ ugwu ndị na-eto n’elu ha. Onye kacha mara amara bụ Cabo Matxitxaco.
Ebe ọ bụ na anyị nọ na ihu igwe, ihu igwe nke ugwu Basque enweghị ike ịla. Ugwu ndị a bụ nkewa nke efere Mediterenian na Atlantic. Ugwu ugwu nwere milder ihu igwe na bụ a Oke ikuku. A maara ihu igwe a nke ọma na ihe anyị maara dị ka "Green Spain." N'aka nke ọzọ, n'ebe ndịda nke ugwu ugwu na n'ime obodo na ihu igwe bụ ala Mediterenian na ụfọdụ atụmatụ nke Ọnọdụ ihu igwe. N'ebe a enwere oke mmiri ozuzo na oyi na-atụ na ọnọdụ okpomọkụ. A na-ahụ nke a nke ukwuu na ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ sitere na obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri ruo obodo ndị dị n'ime ime obodo.
N'ozuzu ya, enwere ike ịsị na ugwu ugwu dum nwere nnukwu mmiri ozuzo. Ọ na-ahụkarị ịhụ nkịta na ndagwurugwu n'ihi mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri dị ugbu a.
O nwere ihe nkpuchi snow n’agbanyeghi na obu oge adighi nma n’oge oyi. N'elu mita 700 ọ na-ahụkarị ịchọta snow n'etiti ọnwa Nọvemba ruo Eprel. Otú ọ dị, ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-agbanwe mgbe nile na snow nwere ike ọ gaghị agbakọ ruo ogologo oge. Otu snow nwere ike imubanye n'ọtụtụ buru ibu n'ihi ọnọdụ ihu igwe, nwere ike gbazee n'ihi Foehn mmetụta. Mgbanwe a na mberede na snow na-agbaze na-ebute ụfọdụ idei mmiri na Álava.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu Basque ma gbaa gị ume ileta ya n'ihi na ị gaghị akwa ụta. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ya, ka anyị mara n’ihe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Basque